“Demokr’Ankizy”: nanafatra ireo kandidà 36 ny ankizy | NewsMada
“Demokr’Ankizy”: nanafatra ireo kandidà 36 ny ankizy
Par Taratra sur 29/10/2018
Narahin’ny maro tamin’ny fahitalavi-pirenena, ny asabotsy teo, ny fandaharana “Demokr’Ankizy”, notontosain’ny Unicef nahafahan’ny ankizy naneho ny heviny sy ny hafany ho an’ireo kandidà 36 hilatsaka ho filoham-pirenena.
Anisan’ny nisongadina tamin’ireo horonantsary fohy notontosain’ireo ankizy tamin’izany ny fanirian’ny ankizy, indrindra ireo any atsimo, mba hanana rano madio fisotro. Ankotra izany ny ady amin’ny hanoanana sy ny mosary ary ny dahalo izay mamely.
Nampitain’ny ankizy ihany koa ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ny ady amin’ny herisetra sy ny fanararaotana ara-nofo mampijaly azy ireo. Eo koa ny tokony hisitrahan’ny ankizy rehetra tsy ankanavaka ny fampianarana tsy miandany.
Fantatra fa anisan’ny voafantina hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena hatao any Amsterdam, ny 14 sy ny 15 novambra izao, ireo horonantsary roa mendrika novokarin’ireo ankizy nandray anjara.
Tsy anisan’ireo mpifidy handatsa-bato ireo ankizy amin’ny 7 novambra izao kanefa anisan’ny manana ny heviny ihany koa mahakasika ny fandaharanasa tokony hotanterahin’ireo kandidà mpilatsaka filoham-pirenena ireo.
“Ankizy avokoa ny 25%-n’ny mponina eto Madagasikara ka rariny raha omena sehatra hitenenana izy ireo”, hoy ny tompon’andraikitry ny Unicef.
Nahitana ankizy avy amin’ny sokajy sy sehatra maro nandray anjara tamin’iny fandaharana “Demokr’Ankizy” iny. Tao ireo ankizy avy any atsimo, avy any avaratra, avy any andrefana, avy any atsinanana. Teo koa ireo avy amin’ny faritra sahirana hatramin’ireo ankizy manana ny lazany.
Ho an’ny Unicef, mpikarakara, tokana ny tanjona, ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ny ankizy sy ny fanajana ny zony.
Marihina fa tafiditra sahady ao anatin’ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny ankizy, hatao amin’ny 20 novambra izao ity hetsika “Demokr’Ankizy” ity.